Muxuu ka yiri Henrikh Mkhitaryan goolkiisii ugu horeeyay ee Manchester United? – Gool FM
Muxuu ka yiri Henrikh Mkhitaryan goolkiisii ugu horeeyay ee Manchester United?
Liibaan Fantastic December 9, 2016
(Manchester) 09 Dis 2016 Xiddiga reer Armenia ee Henrikh Mkhitaryan ayaa xalay goolkiisii ugu horeeyay u dhaliyay kooxdiisa cusub ee Manchester United.
Henrikh Mkhitaryan oo ku dhibtoonayay inuu boos ka helo kooxda macalin Mourinho ayaa soo jiitay indhaha taageerayaasha United iyo tababaraha reer Portugal kadib bandhigiisii wacnaa ee kulamadii u danbeeyay.
27 jirkaan ayaa ku soo bilowday kulankii xalay United ay 2-0 uga adkaatay kooxda Zorya, wuxuu ahaa dhaliyihii goolkii koowaad ee United.
“Guul cajiib ah iyo goolkaygii iigu horeeyay, waxaan inbadan aad u jeclaan lahaa inaan gool ku dhaliyo taageerayaasha Old Trafford hortooda” ayuu yiri Henrikh Mkhitaryan.
“Inbadan ayaan sugayay goolkaan, waxaan rajaynayaa in goolkayga xiga aan ku dhaliyo Old Trafford, waxaan doonayaa inaan gool ku dhaliyo garoonkeena” ayuu sii raaciyay laacibka reer Armenia.
"Waan jeclahay Arsenal" - sidaa waxaa yiri Mario Balotelli
Horyaalka La Liga oo xoog ku heysta tartamada Yurub…(Yaa ku soo xiga?)